Tsika Mhezi Nyankatura Gomsufacer & Supporter | Alice
Yakazvipira kurongedza nekugadzira mesimbi yeresplate kubva muna1998
Electrformed Nickel Label
Stainless Simbi Label
Zinc chiwanikwa Nameplate
Mabheji esimbi - ako zvigadzirwa zvemumiriri mumiriri
Zvishandiso zvikuru zvaAlice zvine marudzi ese echiratidzo chakagadzirwa kubva simbi isina tsvina, Titanium, mhangura kune aluminium uye zvichingodaro. Kufukidza etching, kumanikidza kukanda, oxidizing, kupukuta, rubbering in the process etc.
Tarisa pane fenicha uye zvemagetsi zvemagetsi munda.
Yakanakisa Yemhando Rectangle Aluminium Label Fekitori
Professional Rectangle Aluminium Label Mugadziri, ruzivo nezve rectangle aluminium Label.Makore 21 echiratidzo chesimbi yekugadzira chiitiko, kubva kuTrademark dhizaini yekuumba kugadzirwa kuchigadzirwa, kusuma michina yekukwana, sarudza zvinhu zviri kunze, kudzora huwandu hwese hwekugadzira manejimendi, uye edza kugadzira mhando yakakwana kwazvo.
Yakanyanya kutenderedzwa CD mitsara aluminium Badge Supporter-Alice Factory
Kutsvaga yakatenderedzwa aluminium badge mutengesi? Ruzivo nezve rakatenderedzwa Aluminium Bheji.Isu (Alice) iine makore makumi maviri nemasere ane mwaka wesimbi masaini kugadzirisa bhizinesi. Tine vashandi vanopfuura zana, iyo 1500 mita mita yekugadzirwa base, uye rambai kuunza nyanzvi yemazuva ano zvigadzirwa zvekugadzira. Kuti tisangane nezvinodiwa zvemakwikwi emusika uye tevere maitiro ehupfumi uye mumakore achangopfuura, isu takaramba tichitengera bhizinesi rekutengeserana kwe-e-kutengeserana, tichigara tichifambira mberi uye tichida kufambira mberi.
Best China Best Aluminium Badge Vagadziri-Alice Factory Mutengo - Alice
Profiniveal aluminium Badge gadzira, ruzivo nezve zvakanakisa aluminium bheji.Alice Best China Best Aluminium Badge Vagadziri-Alice Factory Mutengo - Alice, yako fekitori uye vashandi vanopfuura zana, iyo mari isingasviki yeindasitiri imwe chete yechipiri.Isu (Alice) mugadziri wehunyanzvi weChinichexculates, to aluminium, aluminium, ndarira, pvc, etc.
Aluminium Alloy Labels inoshandiswa zvakanyanya muhupenyu hwezuva nezuva-china aluminium Badge Vagadziri-Alice
Kutsvaga Aluminium Badge? Nhoroondo Nezve Red Aluminium BhejiBheji chikamu chakakosha kwazvo che chero chigadzirwa chekuzivikanwa chaiko uye simba reMugadziri.Alloy yakavakirwa paaluminium ine imwe huwandu hweimwe nzira yekufemerwa chimwe chezvinyorwa zvemesimbi.
Nei chosse alice?
Alice Covers 2000 Square Metres uye pane zvinopfuura makumi mashanu zvinhu zvinoshanda mukati muno pano kusanganisa department: qc, chigadzirwa, kusimudzira, timu yedu yehunyanzvi ichagadzira yakakwirira-mhandoMetal Nameslates zvako.
Kusvika zvino, Alice anotobata 5 Patents, uye ane basa rekushandira wega. Izvo zvakavakawo zano renguva refu rekubatana nemakambani mazhinji akakurumbira, Fox muenzaniso: huawei, tsvuku apuro etc.
Professional entrepreneurial kutungamira timu, zvikuru vangangove vakangwara + mashandiro emuchina weketani
Izvo zvakakosha kuti chero kanji kwete kupfuudza bhajeti uye ndosaka tichiteerera zvakakwana.
Chero purojekiti yatinoshanda inotariswa kuti iongororwe ivimbiso yemhando yekugutsa zvinodiwa nenharaunda yemazuva ano.
Chikwata chedu chehunyanzvi chinogona kuisa marudzi ese emidziyo muchivako chakapedzwa sechikamu chemabasa ekuvaka.
Alice akatsaurira chigadzirwa chaicho kubva paakagadzwa muna1998, kunyanya kutarisa fenicha uye magetsi emidziyo yemidziyo senge tsika.
Zvigadzirwa zvikuru zvaAlice zvine marudzi eseMetal Nameslates yakagadzirwa kubva simbi isina tsvina, Titanium, mhangura kune aluminium uye zvichingodaro. Kufukidza etching, kuwirirana kukanda, oxidizing, kupukuta, kubheka kwemakadhi ese, sekusaira kwechando, nhamba yeimba, nhamba yepafura, bar kodhi yemitambo uye zvichingodaro.
"Huru yepamusoro, inoshanda zvakanaka" inotorwa sekuonekwa kwedu.
Kutsvaga uko mavara esimbi ari pane fanicha- Alice
Zvishandiso zvikuru zvaAlice zvine marudzi ese echiratidzo chakagadzirwa kubva simbi isina tsvina, Titanium, mhangura kune aluminium uye zvichingodaro. Kufukidza etching, kumanikidza kukanda, oxidizing, kupukuta, rubber processMetal Labels for fenicha zvichingoenda zvakadaro.
Yakagadzirirwa kugadzirwa kwezviratidzo zvesimbi, stamping yekugadzira maitiro ezviratidzo-alice fekitori
Nheyo tsikwa muchina ndiko kutyaira flywheel kuburikidza injini, uye kuburikidza batira uye kupararira giya kudzinga crank uye unobatanidza tsvimbo mashandiro kufamba mubato uye pasi, uye kutyaira kuswedera achifa kuumba simbi ndiro. Vanonzi kaviri chiito zvinoreva kuti nhau ane sliders maviri, izvo vanokamurwa kuva mubato mukati uye yokunze mubato. Yomukati mubato Zvifambiso punch kana vakafa chakuvhuvhu, uye kuchivanze mubato Zvifambiso kunyorwa anaro rin'i chacho. Panguva iyoyowo, kunyorwa anaro wokutanga runoita kusamuendesa pamucheto simbi mundiro, uye ipapo yomukati yemasiraidhi inofamba kutambanudza. Kutaura chokwadi, ratinoti punching muchina vanowanzochema zita, iro ndizvo kazhinji tinoti munhu punching muchina. zita The dzesayenzi rinofanira kunzi wokudhinda.
Zvakanyatso kudzora mhando yesimbi sign tsika yekugadzirisa uye kupedzisa-alication fekitori
Iyo hydraulic yemuchina (rudzi rwe hydraulic chengetedza) inoshandisa yakakosha hydrautic mafuta seyinoshanda svutugadzike uye hydraulic pombi sosi yesimba. Iyo hydraulic yemafuta inopinda muCylinda Kuisa chisimbiso, zvekuti iyo hydraulic mafuta haigoni kusvetuka. Pakupedzisira, kuburikidza neyakajaira vhoro, iyo mafuta ehuma inotungamirwa mumatanda emafuta kuti aite kuti iyo cylinder / piston kutenderera kuita basa kuti upedze chimwe chiitiko chemuchina wekubereka michina.
Wholesale Chinyorwa chehunyanzvi cheLabel Mugadziri-Alice nemutengo wakanaka - Alice
Iyo nyanzvi yeficha Label Mugadziri-AliceIsu (Alice) mugadziri wehunyanzvi weChinichespaclates, to aluminium, toxpen, yendarira, etc. Zviratidzo zvinogadzirwa zviri nyore uye zvinoshanda, zvakanakisa uye zvine rupo, zvine ruzivo rwekuwedzera, basa rakatsetseka, uye nhaurwa nhatu dzakasimba. Iyo yakajairika nzvimbo yekubatiraAlice Wholesale Finish Fenicha Label Vagadziri-Alice nemutengo wakanaka - Alice, iye anopfuura vashandi vegumi, mutengo wakaderera pane imwe chete yechipiri 2% ine hunhu hwakafanana.
Kana iwe uine mimwe mibvunzo, tinyorere!